I-China Isiseko esitsha sokwenza imveliso yombala yentsimbi yeShijiazhuang Shencai mveliso wombala ubekwe kwimveliso yabenzi kunye nabathengisi | IShencai Pigment
Shijiazhuang Shencai zombala Factory owasekwa ngo-2003 Sine enkulu Iron oksidi sombala Production Base (Hebei Chengyu sakhi Co., Ltd), ibekwe e Ningjin Salt Chemical Industrial Park, kwiPhondo Hebei, na imichiza park park mveliso, ngokusemthethweni imveliso. Imigca yemveliso ezintathu, amandla emveliso yonyaka weetoni ezingama-50 000 Le nkampani inabasebenzi abali-100, begxile kwimveliso yentsimbi oxide ebomvu, i-oxide yentsimbi emthubi, i-iron oxide emnyama, i-iron oxide eluhlaza, i-iron oxide blue, i-iron oxide brown, i-iron oxide orange kunye nezinye izinto zombala oxide yentsimbi, ubukhulu becala kusetyenziswa ipeyinti, izinto zokwakha, irabha zeplastiki kunye namanzi-based umbala uncamathisele, ukwakha umphezulu izinto uhombiso ukutyabeka. Iimveliso zipakishwe kwiingxowa zephepha okwakhiwa okanye iingxowa zeplastiki, 25kg / ibhegi, okanye iingxowa zeetoni.
Kwangelo xesha, sivelisa i-chrome oxide eluhlaza kunye namanzi asekwe kumbala wokuncamathisela, kubandakanya obomvu, omthubi, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, ovunayo, opinki kunye neminye imibala.
Iimveliso zithunyelwa eRashiya, iYiputa, iAlgeria, i-Indonesia, iCongo, iHaiti kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Ngophando oluzimeleyo neqela lobuchwephesha kunye nelebhu yobuchwephesha, ukusetyenziswa kwezixhobo zovavanyo eziphambili ukuqinisekisa ukuba ukuveliswa kwebhetshi nganye yeemveliso ezinomgangatho ozinzileyo. UGu Zhihe, usihlalo webhodi yabalawuli, wamkela abantu abavela kwihlabathi liphela ukuba batyelele umzi-mveliso kwaye bathethathethane ngophuhliso oluqhelekileyo. Siza kubuyisela kubathengi abatsha nabadala ngexabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo efanelekileyo.